Instapage: Yako Yese-In-Imwe PPC uye Ad Campaign Yekumhara Peji Solution | Martech Zone
Saiye mushambadzi, musimboti wezvekuedza kwedu kuyedza kutaura kuti kutengesa, kushambadza, uye kushambadza matanho atakatora kufambisa tarisiro yedu parwendo rwevatengi. Vanotarisira vatengi vangangodaro vasingateedzere nzira yakachena kuburikidza nekushandurwa, zvakadaro, zvisinei nekuti zvinoshamisa sei chiitiko.
Kana zvasvika pakushambadzira, zvakadaro, mutengo wekuwana unogona kudhura… saka tinotarisira kuvamanikidza kuti tikwanise kuona nekuvandudza mhedzisiro yedu. A kumhara peji chikuva inowanzoendeswa kune izvi. Heano mashanu mabhenefiti:
Kumhara Peji Kubatsira
Kupiwa - nekuchengeta mapeji ekumhara kure nedzimwe nzira dzekushandura, tinogona kuwana nzwisiso yakajeka yekudzoka kwedu pane kushambadzira mari.
Maitiro - nekudzikamisa kubatana nezvimwe zviwanikwa, tinodzikisira sarudzo nezviito zvatino tarisira kutora, tichiona kuti vangango shandura pane kutarisa.
Zviri nyore - nekugadzira yakanaka, inokurumidza, uye yakapusa mapeji ekumhara, isu tinowedzera mukana wekuti mushanyi achashandura, zvisinei chishandiso.
Kutungamira Management - kugona kusimbisa zviri nyore, kuchengeta, kuendesa, nzira, uye kupindura kune zvinotungamira pavanenge vachizadza mafomu ekunyoresa.
Testing - nekushandisa chikuva chinosanganisira nzira dzekuyedza, tinogona kuendesa misoro dzakasiyana, zvemukati, mafomu mafomu, uye magadzirirwo ayo anowedzera huwandu hwekushandurwa.
Muenzaniso weRokumusoro Peji
Tarisa uone mamwe akakosha maitiro eiri nyore kumhara peji pazasi - yakaderedzwa kufamba, kwakasimba kusiyanisa zvinhu, imwechete yekufona-ku-kuita, musoro, kutarisisa, uye mabara points ... zvese zvinotyaira mushandisi kuti ashandure:
Instapage Inomhara Peji Platform
Heino sumo yevhidhiyo uye kuongororwa kweiyo Instapage yekumhara peji chikuva:
Kumhara Peji Platform Zvimiro
Instapage's yakazara inogadziriswa inovaka inogonesa mabhizinesi kugadzira anoshamisa, ekushandura-ane hushamwari mapeji ekumhara Iine mamiriro ezvinhu echinyakare ekugadzirisa, anopfuura zviuru zvishanu mafonti, uye mamirioni makumi matatu nematatu emifananidzo yekushanda nayo, iyo Instapage yekumhara peji anovaka anotora marwadzo kunze kwekugadzira pa-brand, shanduko-inoshamwaridzika mapeji ekumhara. Zvimiro zvinosanganisira:
Matemplate Marongero Akavakirwa paindasitiri & Shandisa Kesi - 200+ matemplate akazara uye akagadziridzwa akagadzirirwa kuwedzera shanduko dzako.
Kutaridzika Pa-Peji Kubatana - Shandira pamwe chete nevatambi vechikwata nevatengi mune chaiyo-nguva yekugadzirisa dhizaini yekuongorora maitiro. Tora mapeji ako agadziriswe, aongororwe, abudiswe, uye achinje nekukurumidza.
Form Builder - Wedzera mafomu ekuchinja-chinja aine akawanda masango, anodonhedza-pasi zvinyorwa, kana mabhatani eredhiyo mune mashoma mashoma. Nyore unganidza rumwe ruzivo kubva pane yako tarisiro nekushandura mafomu akaomarara kuita matanho mazhinji. Deredza mapfumo ekukwesana uye ita kuti vashandisi vabatanidzwe neyako mhando.
Kutungamira Management - Chitoro, pfuura, kutengesa kunze kwenyika, kana nzira inotungamira muInstapage kana sanganisa uye uzvipfuure kune yako CRM kana kumwe kusangana. Gamuchira email uye dashboard ziviso kana iwe ukagadzira matsva matsva.
Chivimbiso Meseji - Gadzirisa gwaro rekusimbisa rinoonekwa kana vashanyi vapedza fomu rako.
Mazvita & Kusimbisa Mapeji - Rega vanyoreri vako vatsva vazive kuti unokoshesa kufarira kwavo mushure mekunge vaendesa ruzivo rwavo mune yako yekupinda-fomu neiri-chiratidzo peji rekutenda.
Dhijitari Asset Kuendesa - Zvichengetedze nhanho nekumisikidza otomatiki yedhijitari yekuendesa system. Nezvishoma zvishoma iwe unogona kuona kuti kana wako wekutungamira opts-mune yekupa, inoitwa kuti iwanikwe kwavari kuti vakwanise kurodha pasi.
Instablocks - Kurumidza kuvaka mazana emapeji akasarudzika ekumisikidza uchishandisa yega peji mabhuroko aunokwanisa kugadzirisa, chengeta, uye kushandisa zvekare. Sarudza kubva kusarudzo yema pre-yakagadzirirwa block templates, semusoro, tsoka, zvipupuriro, nezvimwe, kana gadzira yako wega mabhuroko etsika kubva pakutanga.
Widgets - Nesimba wedzera zvidimbu zvekushanda kumapeji ako ekumhara nemajeti.
Mobile Zvidhinha - Gadzira nhare-dzinoteerera kumhara mapeji mune kamwe chete. Kuti uwedzere kugadzirisa, iwe unogona kuviga peji mabhureki eiyo mobile view kuti ugadzire yakanyanya kunaka kubhurawuza ruzivo. Wedzera shanduko nekugadzira yakakodzera nharembozha yevaenzi vako, pasina kushandisa mugadziri.
Global Zvidhinha - Gadzirisa matemplate epasirese nesimba kuti uone kuti mapeji ese anoenderana. Vaka tsika, pa-brand Instablocks senge musoro, tsoka, kana zvigadzirwa zvigadzirwa zvekushandisa pamazana kana zviuru zvemapeji. Wobva wagadzirisa bhuroko kamwe uye ita kuti shanduko dzako dziratidzwe pane peji rega iro rinowoneka.
Buda Pakati Popups & Mafomu Ekutungamira Ekutora - Gadzira zvigadziriswe pop-ups zvichibva pane zvakasarudzika zvinokonzera ne OptinMonster, anotungamira mupi wekubuda-chinangwa popup software, kuwedzera huwandu hweshanduko pamapeji ako ekumhara.
Tsika Mafonti (Google & Typekit) - Tsika fonti zvinoita kuti iwe uratidze chako chiziviso chitupa. Instapage ndiyo chete chikuva chinopa mukana wekupfuura zviuru zvishanu + zveWebhu mafonti zvakapetwa ka5,000 zvakapetwa nesarudzo kupfuura mamwe ese peji rekumisikidza pamusika.
Mufananidzo Asset Manager - Wedzera uye gadziridza ako mapikicha mune iyo Instapage inokwenenzvera peji dhizaini yekuwedzera yekuita yako kusimudzira kana kupa.
Chokwadi Server-padivi A / B Kupatsanura Kuedzwa - Gadzirisa mapeji ako ekumhara kuti utendeuke neA / B yekugona kugona pane edu maviri akaenzana mapeji ekumhara uye mapeji e AMP. Tevedza maitiro evashanyi, bvunzo musiyano nezvinhu zvitsva, marongero, uye / kana dhizaini, uye wedzera yako ekushandurwa mitengo.
AMP Kumhara Mapeji - Gadzira nharembozha dzinoisa pakarepo, gadzira zvirinani kubhurawuza ruzivo, uye kutyaira kumwe kutendeuka neGoogle AMP-inowirirwa mapeji ekumhara. Instapage ine chete anovaka iyo inokutendera iwe kuti ugadzire uye A / B bvunzo kumhara mapeji uchishandisa iyo AMP fomati, hapana mugadziri anodikanwa.
Template kurodha & kurodha pasi - Kurumidza uye nyore kurodha matemplate kubva ThemeForest (kana gadzira yako wega kubva pakutanga). Dhawunirodha kuti ugovane yako yekumisikidza peji dhizaina nenyika.
Nyora Dziviriro - Kuvandudza kugadzirwa uye kugadzirisa kufambiswa kwebasa nekudzivirira vashandisi kubva pakunyora basa remumwe neumwe.
Versioning - Dzosera zvekare mavhezheni epakutanga peji rekumhara runyararo rwepfungwa paunenge uchigadzira, kugadzira, kana kugadzirisa.
Mapapu ekupisa - Mapapu anopisa anopa ruzivo rwakadzama rwekuti vashanyi vako vanofambidzana sei nemapeji ako ekumhara. Izvi zvirinani zvinokuzivisa iwe pane izvo peji peji kune A / B bvunzo.
Shanduko Ongororo - Nongedzera pamwe neGoogle AdWords uye Analytics kuitira nyore kupiwa uye gadzira chaiyo-nguva mutengo-wega-mushanyi uye mutengo-wega-lead metric inoonekwa chaipo muInstapage chikuva. Wobva wapasa metadata inotungamira pasi kune yako CRM kana yekushambadzira otomatiki system.
Kudonha-MuPixel Kutevera - Shandisa yekudonhedzera-pixel yekutevera kuteedzera ekushandura kwekunze kana kudzosera vashanyi vasingashandure pane yako peji yekumhara.
Peji Mapoka eCampaign Management - Instapage yakarerutsa mushandirapamwe manejimendi kuti vatengesi vePPC vakurumidze kuvaka mapoka emashambadziro emakero avo akasiyana ekushambadzira, zvigadzirwa, maficha, uye huwandu hwevanhu.
Yechokwadi-Nguva Mishumo - Tora chaiyo-nguva data, pane chero nguva nguva, pamidziyo yako yese, chero nguva.
Personalization - Kurumidza gadzira yakasarudzika 1: 1 kushambadza-kune-peji post-tinya kumhara peji zviitiko kune vese vateereri neManagement Manager. Fadza vatengi vako nezvakajairwa peji peji izvo zvinokubatsira iwe kuwedzera shanduko, kuwedzera kushambadzira kwedhijitari ROI, uye kudzikisa mutengo wekuwana.
Kubatanidzwa - Nyore sanganisa Instapage neye yanhasi-yakashandiswa-yechitatu-bato kushambadzira, analytics, CRM, email kushambadzira, uye kushambadzira otomatiki mapuratifomu.
Agency Kumhara Peji Platform Zvimiro Sanganisira
YePay Per Click (PPC) uye vamiririri vekushambadzira, Instapage ndiyo yakakwana Sosi mhinduro zvakare. Zvimiro zvemasangano zvinosanganisira:
Master Akaundi - Nyore gadzirisa akawanda makasitoma maakaunzi nekuchinja pakati pamaakaundi ako pasina kupinda mukati kune akasiyana maakaundi. Wona rondedzero yeakaundi iwe yaunowana, chinja kuenda kuaccount yaunoda kushanda pairi, uye woona iyo account / muridzi ruzivo rweakaundi yauri parizvino mune imwechete yakabatana interface.
Pachivande Nzvimbo dzeBasa dzeVatengi - Ronga nzvimbo dzekushandira timu, zvirinani maneja ekudyidzana, uye chengetedza zvakavanzika zvevatengi nekukoka nhengo dzechikwata kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushandira. Iwe unogona kukurumidza kupa mukana wekushambadzira madomeni kune akasarudzika nzvimbo dzekushandira, gadzirisa tsika kubatanidzwa uye, zvakachengeteka kushambadzira kune yekunze CMS kuburikidza nechiratidzo chiratidzo.
Chikwata Nhengo Mvumo - Kugovana basa rako nechikwata kana vatengi hazvichareve kupfuudza rako rekupinda ruzivo. Uine Instapage, iwe unogona nyore nyore kuverenga-chete kuwana kune akakodzera matimu enhengo kana vanobatika, kune akakodzera kumhara mapeji.
Kutsikisa kune Unlimited Domains - Kusiyana nemamwe mapuratifomu ekumhara, Instapage inobvumidza iwe kushambadzira mapeji kune akawanda akasarudzika matunhu kune akawanda emukati manejimendi manejimendi masisitimu.
Kumbira Instapage Demo
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu ehukama zvinongedzo zve Instapage, Themeforest, uye OptinMonster pano.
Tags: peji rekumhara adagency kumhara peji chikuvamushandirapamwe wekumisa pejikutendeuka analyticsfomu muvakigoogle adwordsInstapagekusanganakumhara pejikuvhara peji anovakakumhara peji mienzanisokumhara peji mafomukumhara peji optimizationkumhara peji chikuvalead kubatwatungamira kutora mafomubudappc
GTranslate: Yakareruka WordPress Dudziro Plugin Uchishandisa Google Dudziro